फरीदाबाद - विकिपिडिया
७४२.९ किमी२ (२८६.८ वर्ग माइल)
१९८ मिटर (६५० फिट)
२,४२१/किमी२ (६,२७०/वर्ग माइल)
फरीदाबाद भारतको उतरी प्रान्त हरियाणा प्रदेशको प्रमुख शहर हो । यो फरीदाबाद जिल्लामा पर्दछ । यसलाई सन् १६०७ मा शेख फरीद, जहांगीरको खजांचीले बनाएका थिए । उनको उदेश्य यहाबाट जाने राजमार्गको रक्षा गर्ने थियो । यो दिल्लीदेखि २५ किलोमीटर दक्षिणमा स्थित छ ।
१५ अगस्त १९७९ मा यो हरियाणा को १२औ जिल्ला बनेको थियो । आज फरीदाबाद आफ्नो उद्यॉगहरूको लागि प्रसिद्ध छ । यसको स्थापना १६०७ ई. मा सूफी सन्त शेख फरीदले गरेका थिए । उनले यहा किला र मस्जिदको निर्माण पनि गरेका थिए । केहि समय पछि यहाको आबादी बढ्दै गयो र यसको औद्योगिकरण हुन थाल्यो । अब यहा अनेक औद्योगिक इकाईहरूको स्थापना भैसकेको छ । हरियाणाको आयको ६० प्रतिशत हिस्सा फरीदाबाददेखि नै आउछ ।
यो दिल्लीदेखि मात्र १० किमी. को दूरी मा स्थित छ । सरकारले यसलाइ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित गरिसकेको छ । राष्ट्रीय राजमार्ग २बाट पर्यटक सजिलै फरीदाबाद सम्म पुग्न सक्छन् । सडक मार्ग बाहेक रेल मार्गबाट पनि सजिलै फरीदाबाद सम्म पुगिन सकिन्छ । दिल्ली-मथुरा रेल लाइनमा फरीदाबादमा रेलवे स्टेशन पनि बनाइएको छ । यहा आउने पर्यटक कुनै पनि नीरसता वा बोरियत महसूस गर्दैनन् । उनिहरू यहा शानदार छुट्टि मनाउन सक्छन् र अनेक पर्यटक स्थलहरूको यात्रा पनि गर्न सक्छन् ।
१ प्रमु़ख स्थल
१.१ बडखल ताल
१.२ बाबा फरीद गुम्बद
१.३ सूरज कुण्ड पर्यटक परिसर र हस्तशिल्प मेला
प्रमु़ख स्थल[सम्पादन गर्ने]
बडखल ताल[सम्पादन गर्ने]
फरीदाबादको बडखल ताल धेरै नै सुन्दर छ । यो मानव निर्मित ताल हो । यसको साथ अरावली पर्वत शृङ्खला छ । तालमा पर्यटक वाटर स्पोर्टसको आनन्द लिन सकिन्छ । यहादेखि केहि दूरीमा बडखल गाउ छ । यस गाउको नाम पर्शियन भाषाबाट लिइएको हो । बडखलको हिन्दीमा बिना केहि रूकावट अर्थ हुन्छ । तालमा पानीको आपूर्ति वर्षा को पानी र एक सानो जलधाराबाट हुन्छ । पर्यटकहरूको बस्नको लागि तालको छेउमा रेस्ट हाऊस पनि बनिएको छ । यी रेस्ट हाऊसहरूमा बिना कुनै परेशानको आराममा रहन सकिन्छ ।
बाबा फरीद गुम्बद[सम्पादन गर्ने]
स्थानीय मानिसहरूको अनुसार बाबा फरीदको नाममा नै फरीदाबादको नाम रखिएको हो । यहा बाबा फरीदको मजार पनि बानाइएको छ । यसको प्रति स्थानीय मानिसहरूमा ठुलो श्रद्धा छ । मजारमा पूजा गर्नको लागि प्रतिदिन अनेक श्रद्धालु आउछन् ।
सूरज कुण्ड पर्यटक परिसर र हस्तशिल्प मेला[सम्पादन गर्ने]
दक्षिणी दिल्लीदेखि ८ किमी. को दूरीमा स्थित यो परिसर धेरै नै सुन्दर छ । स्थानीय निवासिहरू र दिल्ली वालाहरूको लागि यो ठाउँ बेहतरीन पर्यटन स्थल हो । फरवरीमा यहा एक मेलाको आयोजन पनि गरिन्छ । मेलामा पर्यटक भारतीय शिल्प कलाको शानदार कलाकृतिहरु हेर्न र किन्न सक्छन् । यसको साथ बडखल ताल र मोर ताल छ । मेला घूमेपछि पर्यटक यी तालहरूको शानदार दृश्य पनि देख्न सक्छन् ।
बल्लबगढ फरीदाबादको सबैभन्दा ठुलो शहर हो । यहा सन् १८५७ मा शहीद राजा नाहर सिंहको महल थियो । बल्लबगढको प्रमुख कालोनिहरु यस प्रकार छन् :
बल्लबगढको प्रमुख स्थान ञस प्रकार छन् :
गुप्ता होटल चौक
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=फरीदाबाद&oldid=906657" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १६:३८, ३ सेप्टेम्बर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।